admin – Page2– Reader Choice
အချိန်တန်တဲ့အခါ အရာအားလုံးဟာ နေသားတကျလေး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ … အဲ့လိုနေသားတကျလေးဖြစ်ဖို့ မျက်ရည်တွေ ဘယ်လောက်ရင်းရဦးမလဲ ဒါမှမဟုတ် နာနေတဲ့ရင်ကိုဖိပြီး ညတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဖြတ်သန်းရဦးမလဲ တစ်စုံတစ်ယောက် သိခဲ့ရင် ဖြေခဲ့ပေးပါ ။ ရင်ကွဲနာဆိုတာ … အပြင်ပန်းကကြည့်ရင် လူကောင်းပကတိလိုပါပဲ စိတ်တွေတော့ ဟိုးအောက်ဆုံးထိ ကျနေတတ်တယ် ။ လမ်းတွေ လျှောက်ရင်း လမ်းတွေလဲ ပျောက်ရသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် …
ချစ်သူတွေကြားမှာဖြစ်စေ ” လင်မယားတွေကြားမှာဖြစ်စေကိုယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်.. ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့.. massage လေးတစ်ကြောင်းက တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးဘယ်လောက် အလေးနက်ထားတယ်ဆိုတာကို သိသာစေပါတယ် ။ တကယ်တော့လူတွေပြောနေကြတဲ့ ” ချစ်တယ် ” ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပိုပြီးနီးစပ်စေတာကလွဲပြီးရင်ဘတ်ထဲကိုတော့ မထိရောက်စေပါဘူး ။ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို ကြိုက်သလောက်ပြောပါစေသူငါ့ အပေါ်တကယ်ချစ်ပါလား ” သူ ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါ ” ဆိုတဲ့ အသိကလွဲပြီး ကိုယ့်အပေါ် ဂရုတစိုက်နဲ့အလေးအနက်ထားတဲ့ အပြုမူလိုတော့ …
မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန် မြန်မာ MMA ကစားသမား အောင်လအန်ဆန်သည် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲအဖြစ် စိန်ခေါ်သူ ဒီရစ်ဒါနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ခဲ့ရာ ပထမအချီ သုံးမိနစ် ၂၆ စက္ကန့်တွင် ချုပ်ကွက်မိပြီး အရေးနိမ့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ONE Championship သည် ဒီရစ်ဒါ၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုအား စိန်ခေါ်နိုင်သည့် ကစားသမားများအားထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ချန်ပီယံဟောင်းများဖြစ်သည့် အောင်လအန်ဆန် (မြန်မာ)နှင့် …
ကိုယ့်ကို မလိုအပ်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ရပ်နေခဲ့ဖူးလား … တစ်ချိန်ချိန်ကျရင်တော့ အရင်လို ပြန်ဖြစ်လာမှာပါဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေ့ရောက်ရင်တော့ လိုအပ်လာမှာပါဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ရင်ထဲ နင့်နေအောင်တော့ ခံစားရတယ်နော် ။ ဒါပေမယ့် နာကျင်စရာတွေလို့မတွက် တစ်နေ့နေ့တွေကို မျက်ရည်တွေနဲ့ မျှော်တတ်တယ်လေ။ မေ့တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် အတိတ်ဆိုတာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရုံလောက် အမှတ်ရစရာပါ ။ သတိရတတ်တဲ့သူအတွက်တော့ အဲ့ဒီအတိတ်က ဖြစ်ရပ်တိုင်းက အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သေစေတဲ့ …
၀ဋ် . . . တစ်လုံးတည်းပဲ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါ သေမတတ် နာကျင်ခံစားရပါတယ်
၀ဋ် . . . တစ်လုံးတည်းပဲ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါ သေမတတ် နာကျင်ခံစားရပါတယ် ။ ဝဋ်ဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြန်ပြီးခံရတတ်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာထက် ပိုပြီး နာကျင်ခံစားရလိမ့်မယ် လူတစ်ယောက် ဝဋ်လည်လာတဲ့အခါ ဘယ်သူကမှ ပြန်ပြီး သတိပေးစရာမလိုဘူး ကိုယ်ဘာကြောင့် ပြန်ပြီး ခံစားနေရလဲဆိုတာ သူ့အလိုလို ခေါင်းထဲမှာ သိတယ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရာအားလုံး ပြန်ပြီးတော့ …
နောက်ကိုလှည့်လို့လဲ ထိုးခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကြီးပဲ တွေ့တယ် အရှေ့ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲ အနာဂတ်က ပန်းခင်းထားတဲ့လမ်း မဟုတ်ပဲ အဖုအထစ်တွေအရမ်းများတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလမ်းကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလဲ ဆက်လျှောက်ရဲရမယ်လေ ။ ဖေးမမယ့်လူမရှိလို့ လဲကျတိုင်းမထတော့ဘူးဆိုရင် . . .ဒီတစ်သက်ပြန်ထဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းလျှောက်သင်ခဲ့တုန်းက အချိန်ကို သတိရပါ . . .လဲကျလို့သာ ပြန်မထခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုချိန် သင် လမ်းလျှောက်တတ်နေမှာတောင် …